ကိုဗစ် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီ ပြောင်း သွားပါပြီ …. – Shwe Sar
ကိုဗစ် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီ ပြောင်း သွားပါပြီ ….
အခုက ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပေါ်လစီမျိုး မဟုတ်တော့ပဲ စည်းစနစ် နဲ့ ဖွင့်ချပါတော့မယ်။ မကြာခင်မှာ ၂ပတ် အိမ်မှာနေခိုင်းမယ် ရောဂါကူးစက်မှု စက်ဝန်းကို ရသလောက်ဖြတ်မယ်။ ဒါပြီးတာနဲ့ ဖွင့်ချတော့မယ်။ စားေ သာ က် ဆိုင်တွေ၊ ခရီးသွားလာမှုတွေ၊ ဘာသာရေးဌာနတွေ ဖွင့်နိုင်သလောက် ဖွင့်ပေးတော့မယ်။
ဒီအချိန်မှာ အရေးကြီးတာက ကျနော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်ခြေတွေ နောက်မှ ပေးပါ။ အရင်ဆုံးစည်းကမ်းလိုက်နာကြပါ။ အစိုးရက အိမ်မှာနေဖို့ ပြောရင် ဘာအြေ ကာင်ြး ပ ချက်ရှိရှိ အိမ်မှာနေပေးကြပါ။ ထွက်လို့ ဖမ်းဖမ်း မဖမ်းဖမ်း ဘယ်သူထွက်ထွက် မထွက်ထွက် ကိုယ်ကတော့ လိုက်နာပါ။
ဒါက အားလုံးကောင်းဖို့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်လဲ ကောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Mask တပ်ဆို တပ်ပါ။ ဆေးစစ်ပြီးမှ ခရီးသွားဆို ဆေးစစ်ဖြစ်အောင် စစ်ပါ။ ကျနော်တို့ရွေးတဲ့အစိုးရကို ကျနော်တို့ရပြီးနောက်မှာ အစိုးရ ညွှန်တဲ့ လ မ်း ကို တန်းတန်းမတ်မတ်လိုက်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်က ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း နောက်လိုက်ကောင်းပါမှလည်း တိုင်းပြည်တစ်ပြည်က လိုရာ ပန်းတိုင်ရောက်နိုင်မှာ …
အခုက ပိတျဆို့ထားတဲ့ပျေါလစီမြိုး မဟုတျတော့ပဲ စညျးစနဈ နဲ့ ဖှငျ့ခပြါတော့မယျ။ မကွာခငျမှာ ၂ပတျ အိမျမှာနခေိုငျးမယျ ရောဂါကူးစကျမှု စကျဝနျးကို ရသလောကျဖွတျမယျ။ ဒါပွီးတာနဲ့ ဖှငျ့ခတြော့မယျ။ စားေ သာ ကျ ဆိုငျတှေ၊ ခရီးသှားလာမှုတှေ၊ ဘာသာရေးဌာနတှေ ဖှငျ့နိုငျသလောကျ ဖှငျ့ပေးတော့မယျ။
ဒီအခြိနျမှာ အရေးကွီးတာက ကနြျောတို့ တဈယောကျခငျြးရဲ့ စညျးကမျးလိုကျနာမှု ဖွဈပါတယျ။ ဆငျခွတှေေ နောကျမှ ပေးပါ။ အရငျဆုံးစညျးကမျးလိုကျနာကွပါ။ အစိုးရက အိမျမှာနဖေို့ ပွောရငျ ဘာအွေ ကာငျွး ပ ခကျြရှိရှိ အိမျမှာနပေေးကွပါ။ ထှကျလို့ ဖမျးဖမျး မဖမျးဖမျး ဘယျသူထှကျထှကျ မထှကျထှကျ ကိုယျကတော့ လိုကျနာပါ။
ဒါက အားလုံးကောငျးဖို့ ခငျဗြားကိုယျတိုငျလဲ ကောငျးဖို့ဖွဈပါတယျ။ Mask တပျဆို တပျပါ။ ဆေးစဈပွီးမှ ခရီးသှားဆို ဆေးစဈဖွဈအောငျ စဈပါ။ ကနြျောတို့ရှေးတဲ့အစိုးရကို ကနြျောတို့ရပွီးနောကျမှာ အစိုးရ ညှနျတဲ့ လ မျး ကို တနျးတနျးမတျမတျလိုကျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ ခေါငျးဆောငျက ဘယျလောကျကောငျးကောငျး နောကျလိုကျကောငျးပါမှလညျး တိုငျးပွညျတဈပွညျက လိုရာ ပနျးတိုငျရောကျနိုငျမှာ …
Previous post မခို့တရို့ ပုံ ရိပ်လေး နဲ့  ဆွဲဆောင် မှု အပြ ည့် ရှိနေ တဲ့ Lလစ်ရှား
Next post တင်သားအလှပေါ်လွန်အောင် ရိုက်ထားတဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ဗီဒီယို